Home / Interior design / Ny fiverenan'ny estetika momba ny fiainana atsinanana - Yuanhe Daqian
2021 / 05 / 27 FisokajianaInterior design 6579 0
Ny ala dia mijanona foana anaty ala vy
Hadinonao ve ny tanjaky ny atidina manidina sy ny taila
Ary ny tononkalo eto an-tany ambanin'ny rindrina mavokely sy ny taila
Ity no fiverenan'ny estetika fiainana fiainana tatsinanana
Misy fahatokisana ara-tantara sy ara-kolontsaina ianteherana
Miaraka amin'ny hoavin'ny fiainana tsaratsara kokoa antenaina
Fantaro ny tena miafina ao an-tanàna
Sary avy amin'ny Internet
Chen Danqing nilaza tamin'ny "Local".
"Tamin'ny taona valopolo taona, matetika izahay sy Muxin dia nirenireny teto (tao amin'ny Metropolitan Museum of Art any New York). Indray mandeha izy dia nibanjina ny tarehiny tampoka ary nanopy ny masony tamiko ary nilaza hoe: artifakitra sinoa, sary sokitra sinoa, ny fahamatorana sy ny hakantony izay niavaka ho an'izao tontolo izao. ”
Tsy hoe noho ny kanto sinoa, ny kanto kanto dia miavaka amin'ny sehatry ny hatsarana, fa noho ny hatsarana atsinanana, izay misy lova ara-kolontsaina sinoa an'arivony sy fahatokisan-tena. Ny fiteny famolavolana dia nalaina avy tamin'ny maritrano taloha izay nosedraina, ary ny tsiro tatsinanana tsy manam-paharoa dia naseho tao amin'ny Nanning tamin'ny kolontsain'ny amponga sy ny sary sokitra artisanaly.
Fanokafana ny Landscape
Mahatsapa ny fiampitana amin'ny fahatokisan-tena ara-kolotsaina
Tahaka ny nahatafintohina an'izao tontolo izao ny "Arivo kilaometatra amoron'ny renirano sy tendrombohitra", ny fisian'ny C&D Yangzhi dia toy izany ihany koa amin'ireo olona kanto tamin'ny fahitana azy voalohany.
Tsiahivina ny tantara, ny kolontsaina ary ny zavakanto. Rehefa miditra amin'ny lavarangana ianao dia afaka mahita fametrahana zavakanto ao amin'ny efitrano, izay asa mahafinaritra ao amin'ny habakabaka. Ny habaka iray manontolo dia tsotra, madio ary akaiky ny natiora, miaraka amin'ny loko lehibe amin'ny ranomainty sy manga ary ny hafanan'ny hazo. Ny rindrin'ny ambainy fitaratra dia mampiditra hazavana voajanahary. Ny hatsarana mahery sy ny gadona mikoriana mifangaro ao anaty efitrano, ary toa mihisatra ny fotoana rehefa miaraka ny zava-misy sy ny fahabangana.
Ny fampifangaroana vita amin'ny vy sy hazo taloha sy vaovao
Miorina mba hamoronana haitao an-kalamanjana anaty trano
Avy amin'ny fahatokisan'ny kolotsaina nasionaly
Ny amponga varahina dia tandindon'ny harena sy fahefana lehibe ho an'ny vondrona vitsy an'isa any atsimo sy atsimo andrefan'i Sina tamin'ny andro taloha, ary nampiasaina ho fitaovana fanaovana lanonana sy amponga ady. Ity amponga vita amin'ny varahina ity dia voaravaka volafotsy dimy baht eo amboniny sy ny manodidina azy, izay maneho ny firarian-tsoa azon'ny olona harena sy fanambinana. Mampiseho ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny foko atsimo andrefana sy ny sinoa Han amin'ny resaka fifanakalozana ara-toekarena sy ny fampidirana kolontsaina tamin'izany fotoana izany.
Tranonkala ofisialin'ny National Museum of China
Amin'ny maha-mpanondrana ara-kolontsaina azy, ny mpamorona dia mandray ny kolontsain'ny ampongaben'i Guangxi Zhuang ao anatin'ny fotony. Ity dia sarintany momba ny fomba fiainan'ny olona sy ny fikatsahany zavakanto amin'izao fotoana izao sy amin'ny toerana misy azy, ary taratry ny “fahatokisana ara-kolontsaina”.
Mampiasa teknolojia maoderina sy teknika fanaovana sokitra i Yuanhe Daqian mba hamakivakiana ny habakabaka ny “amponga varahina dimy baht” hamorona ny kolontsaina mahazatra sy eo an-toerana.
Fanovana ny toerana ao anaty fitoraham-bato
Ny varavarankely dia fomba tsara indramina hisehoana ny fomba fijery
Amin'ny alàlan'ny rindrina voaravaka voninkazo poakaty
Mampiditra ny rivotra sy volana tsy manam-petra.
Amin'ny fiovan'ny vanim-potoana,
Niova ny toerana
Avy amin'ny dingana iray ary hatrany amin'ny sehatra iray
Ny estetika estetika tatsinanana dia noforonina.
Nanentana ny fahatsiarovan-tena momba ny maha-olombelona i Pine ao amin'ny voambolana tatsinanana, araka ny niantsoan'i Li Bai indray mandeha hoe: "Firy taonanao no fantatrao raha misy lohataona mazava maneho taratra kesika kely?" Tian'ireo mpanoratra taloha ny hazo kesika, fijoroana ho vavolombelona momba ny fandehan'ny fotoana, mafy orina sy azo itokisana.
Ny fampifangaroana ny taloha sy ny vaovao dia mamerina ny gadona symmetry ny habaka
Ny kanto taloha amin'ny sokitra hazo dia mifangaro miaraka amin'ny maritrano vaovao hahatsapana ny hatsarana tsy manam-petra amin'ny toeram-ponenana nentim-paharazana. 400 taona ny firafitra sokitra hazo vita amin'ny maha vavolom-belona azy. Ny endriny mafana sy maharitra ary fitaovana mandritra ny taona maro dia toy ny taolan'ny sivilizasiôna atsinanana izay maharitra mandrakizay. Ny zoro rehetra dia mampiseho fihetsika taloha sy malefaka, mitondra fiatraikany amin'ny fahatairana.
Ny habakabaka dia symmetrika miakatra sy midina, ary ny fanaka dia miantso havia sy havanana. Io dia mitovy amin'ny fandovana ilay «compérence» estetika sinoa, izay ampiasaina amin'ny famolavolana ankehitriny, fa ny fahatairana dia mbola mitovy ihany.
Ny fiakarana sy ny fianjeran'ilay rafitra ao anaty trano dia miteraka hatsarana gadona tokana. Ny fanaka dia fitambaran'ny hatsaran-tarehy tatsinanana, ny fandikana tononkalo ary ny fikatsahana sary sokitra tsara. Ny fitaovana mafana sy ny lokon'ny lamba dia mifangaro amin'ny tontolo ivelany, miaraka amin'ny fitadidiana fahatsiarovana ny fotoana azo kitihina.
Ny fametrahana voninkazo tsirairay dia tandindon'ny hery ary mamorona rivo-piainana amin'ny lohataona miaraka amin'ny hazo maty miaraka amin'ny sary sokitra efa zato taona, mitsimoka ary maniry eo amin'ny fihaonan'ireo taloha sy vaovao, izay mamorona ny fifantohan-tsain'ilay habaka. Ny mpamorona dia nampiditra ny fankasitrahana voninkazo, ny hosodoko, ny fanaovana dite ary ny fanoratana tononkalo ao anaty antsipiriany, tsy nampiasaina tampoka ny habaka handrafetana sy hitarika ny fiverenan'ny fiainana kanto ankehitriny.
▲ Planout Layout
Anaran'ilay tetikasa: Ivotoerana mivarotra C&D Yangzhi
Adiresin'ny tetikasa: Nanning, Guangxi
Famolavolana famolavolana sarotra: Shenzhen Panshi Interior Design Co.
Fotoana famolavolana: 2020.09
Fotoana famaranana: 2020.12
Faritry ny habaka: 331㎡
Unite: C&D Real Estate South China Nanning City Company
Fanohanana manokana: Gui Qiang
Ekipa mpaka sary: ​​Yansumi Architecture Space Photography
Previous :: Inona ny tohatra mihodina vy? Next: Marbra + Wood Grille, manamboatra ny hatsaran'ny gadona | Zero Square Design
2021 / 08 / 15 5092
2021 / 08 / 15 5660
2021 / 08 / 15 5393
2021 / 08 / 14 5215
2021 / 08 / 14 5792
2021 / 08 / 14 4990